Sarudza Zvakatove: Tora uye Ronga Mhinduro | Martech Zone
Chipiri, February 11, 2014 Douglas Karr
Isu tinoda maturusi anotora ruzivo kubva kune vatengi, asi hapana chaicho chakaringana-mhinduro yese. Dzimwe nguva iwe unoda akasiyana emibvunzo sarudzo, dzimwe nguva zvine simba mubvunzo uye mhinduro, dzimwe nguva iwe unoda kutarisirwa. Ini ndakakumbirwa kuve Mutongi muIndipolis ' TechPoint Mira Mipiro ya2014 uye Joshua Hall ari kushandisa chishandiso chevatongi kutora ruzivo uye kuvhota pane wese akasarudzwa. Icho chishandiso chakakura icho chimwe chibudiro cheunyanzvi incubators paSproutBox.
Sei KusarudzaKutove Kunoshanda
Sarudza Kare yakatosiyana nezvasara… chishandiso (uye chemahara parizvino) chinokutendera kuti ugovere mubvunzo wekuvhotera kana wepamusoro uye uwane mhinduro nekukurumidza uye nesimba.
Heano zvikonzero zvishanu zvekusaina kusaina kubva Sarudza
Zviri Mahara! Kushandisa SarudzaAkare kuita sarudzo mahara. Yedu yakapusa uye yakarongedzwa sarudzo nzira ichagara iri yemahara. Kunyangwe yedu Yepamberi sarudzo nzira, iine iyo SarudzaAlready Decision Machine ndeye mahara kwenguva pfupi.
Pedza Anogumbura Email 'Pindura-Zvese' - Kana iwe ukabvunza boka revanhu maonero kuburikidza neemail, iwe kazhinji unokonzeresa inoita senge tambo isingaperi yemhinduro. Vazhinji vevatori vechikamu vako vanofarira kufarira kutaura kwavo pane kunzwa zvevamwe vese.
Ita Zvisarudzo Nokukurumidza - Dzimwe sarudzo dzinofanirwa kuitwa nekukasira. SarudzaAnotokumbira mhinduro ipapo uye anoverenga mhedzisiro paanoenda. Iwe une sarudzo yekuganhurira nguva yemhinduro. Iyo DecideAlready Decision Machine inogona kunyange kuverenga mhedzisiro yako otomatiki uye email sarudzo yekupedzisira kune vatori vechikamu vako.
Vaka Kutenda. Vaka Kubvumirana - Paunoita sarudzo uchishandisa SarudzaAkare, vese vako vatori vechikamu vanozoziva kuti izwi ravo rakanzwika. Vanozoziva zvakare kuti zvavakaita zvaifungidzirwa zvakanaka, uye kuti sarudzo yakaitwa zvine hunyanzvi.
Iyo Yechisarudzo Machine - Iine Simba uye Inonakidza! Iyo DecideAlready Decision Machine inokubatsira iwe kuita kunyange sarudzo dzakaomesesa zviri nyore. Vatori vechikamu vako vanogona kuyera imwe neimwe yemhinduro dzako zvinoenderana nenzira dzinoverengeka. Kana kuvhota kukavharwa, unogona kugadzirisa kukosha kwenzira imwe neimwe. Iyo Sarudzo Machine inofungidzira mhedzisiro yezviito zvako padanho rekupedzisira ipapo!
Matipi epamusoro ekunyora Anobudirira mameseji eSMS